Top 6 Software Nchịkọta ịrụzi MP4 Videos on Mac na Windows
Ịhụnanya na-ekiri vidiyo na ekwentị gị? Ọfọn, ma ọ bụrụ na otú ahụ, i nwere ike inwe nza nke MP4 video faịlụ na ekwentị gị nakwa dị ka kọmputa. Ọ bụ ezie na MP4 faịlụ ndị ukwuu pụrụ ịdabere na-akwado a ọnụ ọgụgụ nke obere ngwaọrụ ma e nwere ike inwe mgbe a faịlụ dị nnọọ ajụ egwu. Ị nwere ike na-agbalị na-akpọ ya ihe ọ bụla video ọkpụkpọ ma ọ bụ na ọ bụla na ngwaọrụ ma ị ga-dị nnọọ ada. Ndị a bụ oge mgbe ị na-aghọta na gị MP4 video faịlụ na-agbajikwa ọ bụ mebiri emebi ma si otú kwesịrị a idozi. MP4 video faịlụ nwere ike mfe rụziri na enyemaka nke software ịrụzi nchịkọta dị na ahịa. Ọtụtụ n'ime ndị a software nchịkọta maka ịrụzi MP4 faịlụ ndị dị na free ikpe mbipute otú i nwere ike na-agbalị ha n'iru unu n'ezie ịzụta ha maka inwekwu ojiji.
Top 6 Software ịrụzi MP4:
A bụ ndepụta nke kasị mma software nchịkọta dị na ahịa nke pụrụ inyere gị na ịrụzi gị MP4 video faịlụ ngwa ngwa.
Download gị videos site na integrated search engine: Mgbe i Wondershare Video Ntụgharị Ultimate arụnyere na kọmputa gị, ị na-adịghị mkpa ka nchegbu banyere aga nchọgharị gị na mgbe ahụ nbudata ọkacha mmasị gị video. Ị nwere ike dị na-eji ha integrated search engine ịchọta ọkacha mmasị gị video na ị chọrọ ibudata.
Nkwado maka a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ formats: E wezụga MP4, na Wondershare Video Converter Ultimate akwado a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ na faịlụ formats dị ka MP3, avi, MPEG wdg
Dezie gị video: Video edezi bụ otu n'ime ihe ndị kasị pụrụ iche atụmatụ nye site na Wondershare Video Ntụgharị Ultimate na-adịghị ná kasị nke ọzọ video Ntụgharị software nchịkọta.
Ọkụ DVD: Wondershare Video Converter Ultimate ike ọ bụghị naanị-eji maka nbudata na converting videos, ugbu a, ị nwekwara ike ọkụ DVD na faịlụ na ị ebudatara.
Akwado nyiwe: Windows / Mac
MP4 Video rụkwaa Utility 2.0.0.16
Nkwado maka iche iche faịlụ formats: MP4 Video rụkwaa Utility software ngwugwu bụghị nanị na-akwado MP4 faịlụ ma a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ na faịlụ formats dị ka MOV, MPEG wdg
Ejiri niile ụdị emebi: E nwere ike ịbụ iche iche ihe n'azụ mebiri gị MP4 video faịlụ. Virus agha, ngwaike odida bụ ụfọdụ n'ime isi ihe n'azụ na a mebiri. Otú ọ dị mgbe ị na-eji MP4 Video rụkwaa Utility, ị pụrụ ijide n'aka na gị mmebi ga-rụziri n'agbanyeghị ihe kpatara ya.
Oru oma na a pụrụ ịdabere: The software bụ ukwuu pụrụ ịdabere na oru oma dị ka ọ na-adị mfe atọghata ọbụna nnukwu faịlụ ngwa ngwa. Nke a software dabeere na a ukwuu oru oma algọridim nke tracks ọ bụla oru maka ihe ọ bụla njehie.
Nkwado otu: Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ndị ahịa nwere ike ngwa ngwa ịrụzi ha mebiri emebi MP4 faịlụ ma ọ bụrụ na ị na-eche ihu ọ bụla mbipụta, ị nwere ike mfe kpọtụrụ nkwado otu nke nwere ike kpọtụụrụ 24X7 maka enyemaka.
Akwado nyiwe: Windows (XP, Vista, 7, 8)
Mmepụta: MP4 Video rụkwaa
Ala nke iji: Ọ bụrụ na ị na-eche ihu nsogbu nke mebiri emebi MP4 video faịlụ, mgbe ahụ, i nwere ike na-achọ ụfọdụ ngwá ọrụ na-nwere ike ngwa ngwa rụkwaa ya na MP4Repair bụ nke zuru okè na ngwá ọrụ dị otú ahụ ndapụta. Ị dị nnọọ nwere bulite gị MP4 clip na pịa na idozi button ịrụzi gị faịlụ ngwa ngwa.
Ọ dịghị echichi: ezie na ọtụtụ nke MP4 idozi ngwaọrụ achọ ka ị na wụnye ha n'ihu gị nwere ike iji ha, MP4 rụkwaa bụ ihe online ịba uru ngwá ọrụ na-adịghị achọ ụdị ọ bụla nke nwụnye.
Kpamkpam free: Ukwuu n'ime niile MP4 idozi ịba uru software nchịkọta-abịa a free ikpe mkpọ ma ị ga-azụta zuru version iji kporie niile uru. Otú ọ dị na nke a online mmebi idozi ịba uru, i nwere ike na-ekpori ndụ niile uru n'ihi na free dị ka e nweghị zụrụ mbipute dị. Niile ụlọ ọrụ na-nyere na free version naanị.
Ndozi Ọbụna nnukwu faịlụ n'ime nkeji ole na ole: The MP4 rụkwaa ịba uru na-eme ka n'aka na ọbụna ịrụzi nnọọ nnukwu faịlụ na dị nnọọ a nkeji ole na ole.
Akwado Platform: Online
Ndozi niile ụdị faịlụ: File rụkwaa bụ kacha faịlụ idozi ngwá ọrụ ebe ị nwere ike imezi faịlụ nke iche iche ụdị gụnyere MOV, MP4, MPEG wdg
Mfe interface maka adịrị faịlụ: The ọrụ interface nke software bụ nnọọ mfe nke-enye gị ịrụzi faịlụ ma wepụ ya na a ọhụrụ faịlụ mfe.
The nanị ihe ngwọta virus mebiri emebi faịlụ: Ọ bụrụ na gị MP4 faịlụ a mebiri site nje, ahụ anya dịghị ihe ọzọ dị ka File rụkwaa ịba uru software bụ zuru okè ngwọta maka gị!
Akwado Platform: Windows 7
Mmepụta: File rụkwaa
Remo rụkwaa MOV
Fixes njehie na MP4 faịlụ formats: The Remo rụkwaa MOV bụ ihe zuru ezu software ịba uru ngwugwu na ike mfe idozi gị ezighị ezi MP4 faịlụ ngwa ngwa. The software na-akwado MOV, Raw, MP4a na MP4v faịlụ formats otú i nwere ike idozi emebi site na ndị a faịlụ formats kwa.
Solves "nwere ike na-adịghị njikere faịlụ" njehie ngwa ngwa: Ọ bụrụ na ị na-mgbe niile na-a njehie nke "nwere ike ọ bụghị na-emeghe faịlụ" na gị video ọkpụkpọ, mgbe ahụ, ọtụtụ eleghị anya gị MP4 faịlụ na-emerụ. Dị nnọọ bulite ya na Remo rụkwaa MOV ma wepụ a ọhụrụ njehie free faịlụ ngwa ngwa.
Akwado nyiwe: Windows 7, Mac
Mmepụta: Remo Software
Fixes a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ formats: E wezụga MP4 video faịlụ, ị nwekwara ike ịrụzi a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ na faịlụ formats dị ka avi, jpg, MP3, MPEG wdg
Ịrụzi ikpe mebiri emebi faịlụ: ezie na ọtụtụ nke mmebi idozi software nchịkọta ịrụzi faịlụ emetụta virus, Newlive All Media Fixer pro-azọrọ ịrụzi ikpe faịlụ ebudatara kwa.
Mmepụta: support.Excellence Software Inc.
Olee otú iji tọghata ARF faịlụ Ọkpụkpọ ka MP4 na Zero Ogo Loss
Olee otú Tinye MP4 Metadata maka Windows / Mac (Mavericks gụnyere)
20 Free YouTube ka MP4 converters
> Resource> MP4> Top 6 Software Nchịkọta ịrụzi MP4 Videos on Mac na Windows